Excel ကို JSONLines သို့ပြောင်းပါ - ဇယားဘာသာပြောင်း အွန်လိုင်း
CSV မှ Markdown မှCSV မှ Template မှCSV မှ LaTeX မှCSV မှ CSV မှCSV မှ Excel မှCSV မှ JSON မှCSV မှ JSONLines မှCSV မှ HTML မှCSV မှ SQL မှCSV မှ YAML မှCSV မှ XML မှCSV မှ ASCII မှCSV မှ MediaWiki မှCSV မှ AsciiDoc မှCSV မှ Jira မှCSV မှ Textile မှCSV မှ reStructuredText မှCSV မှ PHP မှCSV မှ Ruby မှCSV မှ ASP မှCSV မှ ActionScript မှCSV မှ BBCode မှCSV မှ PDF မှCSV မှ JPEG မှJSON မှ Markdown မှJSON မှ Template မှJSON မှ LaTeX မှJSON မှ CSV မှJSON မှ Excel မှJSON မှ JSON မှJSON မှ JSONLines မှJSON မှ HTML မှJSON မှ SQL မှJSON မှ YAML မှJSON မှ XML မှJSON မှ ASCII မှJSON မှ MediaWiki မှJSON မှ AsciiDoc မှJSON မှ Jira မှJSON မှ Textile မှJSON မှ reStructuredText မှJSON မှ PHP မှJSON မှ Ruby မှJSON မှ ASP မှJSON မှ ActionScript မှJSON မှ BBCode မှJSON မှ PDF မှJSON မှ JPEG မှLaTeX မှ Markdown မှLaTeX မှ Template မှLaTeX မှ LaTeX မှLaTeX မှ CSV မှLaTeX မှ Excel မှLaTeX မှ JSON မှLaTeX မှ JSONLines မှLaTeX မှ HTML မှLaTeX မှ SQL မှLaTeX မှ YAML မှLaTeX မှ XML မှLaTeX မှ ASCII မှLaTeX မှ MediaWiki မှLaTeX မှ AsciiDoc မှLaTeX မှ Jira မှLaTeX မှ Textile မှLaTeX မှ reStructuredText မှLaTeX မှ PHP မှLaTeX မှ Ruby မှLaTeX မှ ASP မှLaTeX မှ ActionScript မှLaTeX မှ BBCode မှLaTeX မှ PDF မှLaTeX မှ JPEG မှMarkdown မှ Markdown မှMarkdown မှ Template မှMarkdown မှ LaTeX မှMarkdown မှ CSV မှMarkdown မှ Excel မှMarkdown မှ JSON မှMarkdown မှ JSONLines မှMarkdown မှ HTML မှMarkdown မှ SQL မှMarkdown မှ YAML မှMarkdown မှ XML မှMarkdown မှ ASCII မှMarkdown မှ MediaWiki မှMarkdown မှ AsciiDoc မှMarkdown မှ Jira မှMarkdown မှ Textile မှMarkdown မှ reStructuredText မှMarkdown မှ PHP မှMarkdown မှ Ruby မှMarkdown မှ ASP မှMarkdown မှ ActionScript မှMarkdown မှ BBCode မှMarkdown မှ PDF မှMarkdown မှ JPEG မှExcel မှ Markdown မှExcel မှ Template မှExcel မှ LaTeX မှExcel မှ CSV မှExcel မှ Excel မှExcel မှ JSON မှExcel မှ JSONLines မှExcel မှ HTML မှExcel မှ SQL မှExcel မှ YAML မှExcel မှ XML မှExcel မှ ASCII မှExcel မှ MediaWiki မှExcel မှ AsciiDoc မှExcel မှ Jira မှExcel မှ Textile မှExcel မှ reStructuredText မှExcel မှ PHP မှExcel မှ Ruby မှExcel မှ ASP မှExcel မှ ActionScript မှExcel မှ BBCode မှExcel မှ PDF မှExcel မှ JPEG မှHTML မှ Markdown မှHTML မှ Template မှHTML မှ LaTeX မှHTML မှ CSV မှHTML မှ Excel မှHTML မှ JSON မှHTML မှ JSONLines မှHTML မှ HTML မှHTML မှ SQL မှHTML မှ YAML မှHTML မှ XML မှHTML မှ ASCII မှHTML မှ MediaWiki မှHTML မှ AsciiDoc မှHTML မှ Jira မှHTML မှ Textile မှHTML မှ reStructuredText မှHTML မှ PHP မှHTML မှ Ruby မှHTML မှ ASP မှHTML မှ ActionScript မှHTML မှ BBCode မှHTML မှ PDF မှHTML မှ JPEG မှSQL မှ Markdown မှSQL မှ Template မှSQL မှ LaTeX မှSQL မှ CSV မှSQL မှ Excel မှSQL မှ JSON မှSQL မှ JSONLines မှSQL မှ HTML မှSQL မှ SQL မှSQL မှ YAML မှSQL မှ XML မှSQL မှ ASCII မှSQL မှ MediaWiki မှSQL မှ AsciiDoc မှSQL မှ Jira မှSQL မှ Textile မှSQL မှ reStructuredText မှSQL မှ PHP မှSQL မှ Ruby မှSQL မှ ASP မှSQL မှ ActionScript မှSQL မှ BBCode မှSQL မှ PDF မှSQL မှ JPEG မှMediaWiki မှ Markdown မှMediaWiki မှ Template မှMediaWiki မှ LaTeX မှMediaWiki မှ CSV မှMediaWiki မှ Excel မှMediaWiki မှ JSON မှMediaWiki မှ JSONLines မှMediaWiki မှ HTML မှMediaWiki မှ SQL မှMediaWiki မှ YAML မှMediaWiki မှ XML မှMediaWiki မှ ASCII မှMediaWiki မှ MediaWiki မှMediaWiki မှ AsciiDoc မှMediaWiki မှ Jira မှMediaWiki မှ Textile မှMediaWiki မှ reStructuredText မှMediaWiki မှ PHP မှMediaWiki မှ Ruby မှMediaWiki မှ ASP မှMediaWiki မှ ActionScript မှMediaWiki မှ BBCode မှMediaWiki မှ PDF မှMediaWiki မှ JPEG မှMarkdown မီးစက်Template မီးစက်LaTeX မီးစက်CSV မီးစက်Excel မီးစက်JSON မီးစက်JSONLines မီးစက်HTML မီးစက်SQL မီးစက်YAML မီးစက်XML မီးစက်ASCII မီးစက်MediaWiki မီးစက်AsciiDoc မီးစက်Jira မီးစက်Textile မီးစက်reStructuredText မီးစက်PHP မီးစက်Ruby မီးစက်ASP မီးစက်ActionScript မီးစက်BBCode မီးစက်PDF မီးစက်JPEG မီးစက်
CSV မှ JSON မှ LaTeX ဇယား မီးစက်
Excel ကို JSONLines သို့ပြောင်းပါ
ဤ converter ကို Excel (သို့မဟုတ်အခြားစာရင်းဇယား) ကို JSONLines သို့ပြောင်းရန်အသုံးပြုသည်
Excel သို့ပြောင်းလဲဖို့ JSONLines ကုဒ်ပြင်ဆင်ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ data ကိုမဆိုသိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်။
တစ်ဦး Excel ကဲ့သို့အယ်ဒီတာသို့မဟုတ်ဆောက်အလွယ်တကူပြင်ဆင်ရန်ယခင်များ၏ Excel data တွေကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
Copy ကူးပါသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ JSONLines data တွေကို download လုပ်ပါ။
CSV JSON LaTeX Markdown Excel HTML SQL MediaWiki
URL မှ Excel ထုတ်ယူပါ
စားပွဲပေါ်မှာပါ0င်သော webpage url ကိုရိုက်ထည့်ပါ
Markdown Template LaTeX CSV Excel JSON JSONLines HTML SQL YAML XML ASCII MediaWiki AsciiDoc Jira Textile reStructuredText PHP Ruby ASP ActionScript BBCode PDF JPEG
ဘယ်လို Convert Excel to JSONLines အွန်လိုင်းလော
1. လွှတ်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့် Excel paste
ရုံ (မိုက်ကရိုဆော့ဖ Excel ကနေမိတ္တူစားပွဲ Google က Sheet များ, Mac အတွက်နံပါတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဝဘ်စာမျက်နှာ) သို့မဟုတ် paste ဆွဲ-and drop သင့်ရဲ့ Excel အဆိုပါ textarea of ဒေတာအရင်းအမြစ် သို့၎င်း, ကခကျြခငျြးပြောင်းလဲခြင်း၏မှော်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
2. Edit ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့် Excel, လိုအပ်လျှင်
သငျသညျ Excel through ဇယားအယ်ဒီတာ လိုအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဒေတာကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်ကို၎င်း, အပြောင်းအလဲများကို Real-time အတွက် JSONLines သို့ကူးပြောင်းပါလိမ့်မည်။
3. အဆိုပါပြောင်းလဲ copy JSONLines
JSONLines ဒေတာများကို box ထဲတွင် box ထဲတွင် box ထဲတွင်ထုတ်ပေးသည်။ ဤလွယ်ကူသော converter သည်လိုင်းတစ်ခုစီသည်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည့်အချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းရန် defaults defaults သည်ဤအပြင်အရာတစ်ခုအပြင်၎င်းသည် array format ဖြင့်လိုင်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
မှတ်ချက်: သင့်ဒေတာကိုလုံခြုံ, အပြောင်းလဲသင့် web browser မှာလုံးဝပြုသောအမှုနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ data ကိုမဆိုသိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Excel စတိုးဆိုင်မှအသုံးပြုသူများကိုဖွတစ်ခုအီလက်ထရောနစ် spreadsheet application ဖြစ်ပါတယ်, စုစည်း, Calculator နှင့်အတန်းများနှင့်စစ်ကြောင်းများကတက်ကျိုးပဲ့နေတဲ့စာရင်းဇယားစနစ်အား အသုံးပြု. ဖော်မြူလာနှင့်အတူဒေတာ manipulate ။
JSON Lines သည်စနစ်တကျမှတ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည့်စနစ်တကျအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်အဆင်ပြေသောပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Unix-style text processing tools and shell pipelines များနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်တမ်းဖိုင်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စဉ်များအကြားမက်ဆေ့ခ်ျများဖြတ်သန်းရန်အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပုံစံဖြစ်သည်။
CSV မှ Excel မှ
CSV ကို Excel သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ ASCII မှ
Excel ကို ASCII ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ ActionScript မှ
Excel ကို ActionScript ခင်းကျင်း သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ BBCode မှ
Excel ကို BBCode ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ AsciiDoc မှ
Excel ကို AsciiDoc ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ Excel မှ
Excel ကို Excel သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ HTML မှ
Excel ကို HTML ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ CSV မှ
Excel ကို CSV သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ Jira မှ
Excel ကို Jira စားပွဲတင် သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ JPEG မှ
Excel ကို JPEG စားပွဲတင် သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ ASP မှ
Excel ကို ASP Array သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ JSON မှ
Excel ကို JSON Array သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ MediaWiki မှ
Excel ကို MediaWiki ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ PDF မှ
Excel ကို PDF ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ LaTeX မှ
Excel ကို LaTeX ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ Markdown မှ
Excel ကို Markdown ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ PHP မှ
Excel ကို PHP Array သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ SQL မှ
Excel ကို SQL ထည့်ပါ သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ Ruby မှ
Excel ကို Ruby array သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ Template မှ
Excel ကို template ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ reStructuredText မှ
Excel ကို reStructuredText ဇယား သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ YAML မှ
Excel ကို YAML sequence ကို သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ Textile မှ
Excel ကို Textile စားပွဲတင် သို့ပြောင်းပါ
Excel မှ XML မှ
Excel ကို XML သို့ပြောင်းပါ
HTML မှ Excel မှ
HTML ဇယား ကို Excel သို့ပြောင်းပါ
JSON မှ Excel မှ
JSON Array ကို Excel သို့ပြောင်းပါ
LaTeX မှ Excel မှ
LaTeX ဇယား ကို Excel သို့ပြောင်းပါ
Markdown မှ Excel မှ
Markdown ဇယား ကို Excel သို့ပြောင်းပါ
MediaWiki မှ Excel မှ
MediaWiki ဇယား ကို Excel သို့ပြောင်းပါ
SQL မှ Excel မှ
SQL ထည့်ပါ ကို Excel သို့ပြောင်းပါ
သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများဒီအွန်လိုင်း tool ကိုအကြံပြုပေးနိုင်မလား?
© 2022 tableConvert, All rights reserved.
English Afrikaans አማርኛ اَلْعَرَبِيَّةُ azərbaycan dili беларуская мова български език বাংলা bosanski jezik Català Cebuano corsu čeština Cymraeg dansk Deutsch Ελληνικά Esperanto Español eesti euskara فارسی suomi Français Frysk Gaeilge Gàidhlig galego ગુજરાતી هَوُسَ Hawaiian हिन्दी Hmong Hrvatski Kreyòl ayisyen magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Asụsụ Igbo Íslenska Italiano Hebrew 日本語 Javanese ქართული қазақ тілі ខេមរភាសា ಕನ್ನಡ 한국어 Kurdî Кыргызча latine Lëtzebuergesch ພາສາ lietuvių kalba latviešu valoda fiteny malagasy te reo Māori македонски јазик മലയാളം Монгол хэл मराठी Bahasa Malaysia Malti ဗမာစာ नेपाली Nederlands Norsk chiCheŵa ଓଡ଼ିଆ ਪੰਜਾਬੀ Polski پښتو Português Română Русский Ikinyarwanda सिन्धी සිංහල slovenčina slovenščina Samoan chiShona Soomaaliga Shqip српски језик Sesotho Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు тоҷикӣ ไทย Türkmen Wikang Tagalog Türkçe татар теле ئۇيغۇرچە‎ Українська اردو Ўзбек Tiếng Việt isiXhosa ייִדיש Yorùbá 简体中文 繁體中文 isiZulu